असार अन्तिम साता उपराष्ट्रपति कार्यालयको मिटिङ हलमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले सोधे, ‘स्पेन कस्तो लाग्यो त ?’‘हामी त भाग्यमानी रहेछौं । १४ वर्षको उमेरमै स्पेन घुम्न पायौं ।
टेक्सास - हरेक वर्ष गर्मी लागेपछि अमेरिकामा दुई महिना स्कुल बिदा हुन्छ । बिदाका बेला यहाँ रहेका नेपाली बालबालिका विभिन्न गतिविधिमा भाग लिन्छन् । घुमघाम गर्छन् । प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छन् । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छन् । कति बालबालिका यतैको अर्को सहरमा घुम्न जान्छन् ।
ए नानी ! शारदा, एकछिन भित्र आऊ त’ भित्र भान्साबाट हजुरआमाले बोलाउनुभयो । शारदा बाहिर सिकुवामा खेल्दै थिइन् । ‘किन हजुरआमा ? किन बोलाउनुभएको ?’ भन्दै शारदा पनि भित्र गइन् ।
ओखलढुंगा सदरमुकामस्थित लालीगुराँस इंग्लिस स्कुलकी कक्षा १० की छात्रा श्रेया राजभण्डारीले अदालत देखेकी थिइन् । तर अदालतले कसरी, के काम गर्छ भन्नेबारे जानकारी थिएन । जब उनले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश, रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदारलगायतको कक्षा लिइन्, त्यसपछि उनलाई धेरै कुरा थाहा भयो ।
पोखराको माछापुच्छ्रे टोलमा रहेको पोखरा लर्नस एकेडेमीमा कक्षा १० मा पढ्ने ३० विद्यार्थीले गत सोमबार वृद्धवृद्धाको सेवामा जुट्ने निर्णय गरे ।
फेसबुकमा के लेख्न हुन्छ, के लेख्न हुँदैन ? ट्वीटर प्रयोग गर्दा के–केमा ध्यान दिनुपर्छ ? युटयुबका कस्ता सामग्री हेर्ने ? कस्ता नहेर्ने ? अनि इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा सजग हुनुपर्ने कुरा के–के हुन् ?
कहाँ गयौ खैखैयतातिर आऊ आफ्नो काम सकेरफेरि उता जाऊ ।
ल्याप्चे लाउने ठुल्दाजैरैछौ डल्ले डल्लेबूढी औंला भनेरनाम राख्यो कल्ले ?
काठमाडौंमा कर्णाली नदी छैन । तर सेवासुविधाका दृष्टिले कर्णालीकै झल्को दिने ग्रामीण बस्ती भने अझै छन् । त्यस्ता बस्तीमा विकासका आधारभूत सेवा पुग्न सकेको छैन । साँखुबाट केही माथि उक्लिनेबित्तिकै ‘काठमाडौंको कर्णाली’ भनेर चिनिने गाउँ हुन्– शंखरापुर नगरपालिकाका घुमारचोक र लप्सेफेदी ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ७ का सुशील गिरी ९ वर्षका भए । उनी हलेसी महादेव मन्दिरका पुजारी हुन् । तर मन्दिरका एक जना मात्र पुजारी होइनन् । एक मूल पुजारी र उनकै ठूलो बुवाको छोरा ८ वर्षीय सुदिन गिरी पुजारीका रूपमा छन् । बढी समय सुशील नै मन्दिर पुग्छन् । उनलाई बिहान/बेलुका मन्दिरसम्म लग्ने काम काका कमल गिरीले गर्छन् । कमल पनि पहिला मन्दिरमा बाल पुजारीको रूपमा काम गर्थे ।
उफ् ! यतिबेला गर्मीयाम छ । गर्मीका बेला धेरैलाई आइसक्रिम खान मन पर्छ । त्यो पनि फरक–फरक स्वादको ! तर थाहा छ, आइसक्रिमको सुरुवात कसरी भयो ?
नेपालको कानुनमा बालअधिकारका धेरै कुरा लेखिएका छन् । बालअधिकारबारे नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेको छ । तर धेरै अधिकार अझै व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । धेरै बालबालिकाले आफ्ना कुरा आफैं भन्न सक्दैनन् । अन्यायको विरोध गर्न सक्दैनन् । आफूमाथि हुने हिंसाको प्रतिकार गर्न त झनै सक्दैनन् । त्यसैले पनि बालअधिकार लागू गर्न ठूलाले नै पहल गरिदिनुपर्छ ।’’
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !हजुर हाम्रा समस्यासँग अनविज्ञ हुनुहुन्न । हजुरलाई पनि हाम्रो देशका विकृति हटून् भन्ने पक्कै लागेको होला । जनताले सुशासन र अमनचैन पाऊन् भन्ने चाहना होला । त्यसका लागि पहल पनि गरिरहनु नै भएको छ होला । यति हुँदाहुँदै पनि मैले देखेका केही कुरा भन्न चाहन्छु ।
विद्यालय जान्छु म, राम्रो लेख्न जानेको छैन ।बाआमाले भनेको कुरा राम्रोसँग मानेको छैन ।
ए ! साथीकर्कलाको पातलुले लुले हातखेलौँ एक साथनसोध न जात ।ए ! साथीबजिसक्यो सातपरिसक्यो रातपाक्यो होला भातसमाऊ मेरो हातनगर न घात ।
धानकोदोले भरिइसकेखेतबारीका गरा,हेर्दाहेर्दै प्रकृति नैभयो निकै हराभरा ।वनपाखा हराभराखरबारीमा हरियो घाँस,हरियालीको उत्कर्ष हो साउन–भदौ मास ।
एक दिन सुलक्षण, विलक्षण, दीपिका, कृतिका र सुशोभन आफ्नो गृहकार्य सकिएपछि खेल्न निस्किए । उनीहरूको घरनजिकै ठूलो चउर थियो । घाम ढल्किँदै पश्चिमतिर लागिरहँदा गर्मीको महिना भए पनि शीतल थियो वातावरण । उनीहरू त्यहीँ बसे ।
गएको साता पोखरामा विद्यालयस्तरीय एन्फा कप २०७५ प्रतियोगिता भयो । प्रतियोगितामा छात्रतर्फको उपाधि सैनिक आवासीय महाविद्यालय र छात्रातर्फ चिल्ड्ेरन एकेडेमीले जितेका छन् । जिल्लास्तरीय प्रतियोगितामा छात्रतर्फको फाइनलमा सैनिकले अम्मरसिंह माविलाई ५–४ गोलले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो ।